Hyundai KONA servicing in Derby from John Cooper - 01332 343968
John Cooper was established in 1965 and has been providing exceptional garage services for cars, motorbikes and commercial vehicles in the Derby area ever since, so we understand our customers and can help you if your Hyundai KONA needs a service.
When you service your Hyundai KONA with us, we can service to the same specification as Hyundai main dealers to protect your warranty at a much lower cost, or we can carry out one of our in-house servicing levels which is tailored to meet your vehicle’s exact needs (see below for more information on our in-house servicing). Regardless of the servicing level you choose, as part of your Hyundai KONA service we will carry out a free diagnostic check for your peace of mind.
At John Cooper we consider your pride and joy to be our pride and joy, and we are so confident you will be happy with our service, we offer a 12 month / 12,000 mile parts and labour warranty when servicing your Hyundai KONA.
Call us today to discuss which servicing level best meets the needs of your Hyundai KONA or book your servicing appointment on 01332 343968.
Basic, Interim & Full Hyundai KONA Servicing
Our in-house Hyundai KONA servicing comprises of three service levels; Basic, Interim and Full, which are expertly designed to suit the needs of your vehicle whatever its age, mileage, service history or condition, so you know it is getting the service it needs.